विदेशबाट नेपाल आउनेलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिश – Nepal Japan
विदेशबाट नेपाल आउनेलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिश
नेपाल जापान ७ मंसिर २०:५१
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण रोक्न कडाईको नीति अख्तियार गरेको छ । मन्त्रालयले स्थल तथा हवाई मार्गबाट नेपाल आउनेलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै स्थलमार्ग वा हवाइमार्गबाट नेपाल आउने सबैलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्न अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार १ दिनको क्वारेन्टिन बसाइको क्रममा लक्षण देखिएका व्यक्तिको पिसीआर परीक्षण गरिने र अन्यलाई घर पठाइने गरी पत्राचार गरिएको छ ।
अहिले संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्दै गएकाले सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने नीतिलाई कडाइ गर्न लागेको हो । अहिले उपत्यका बाहिरबाट तथा विदेशबाट निर्वाध भित्रिने र बाहिरिने क्रम बढिरहेकाले संक्रमण बढिरहेको छ ।
त्यसो त यसअघि विदेशबाट आउनेलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेकोमा पछिल्लो समय यसको कार्यायन्वयनमा छैन । सरकारले कहिलेदेखि अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नीति ल्याउँछ त्यो भने खुलेको छैन ।
मौलिक भाषा, कला तथा संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण रोक्न उपराष्ट्रपतिको आग्रह
११ कार्तिक ००:५२
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्तामा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक मन्दिप श्रेष्ठ
११ कार्तिक ००:२८
‘उपविजेता होइन प्रथम भएर शिल्ड भित्र्याउन चाहन्छौँ’
११ कार्तिक ००:१२
११ कार्तिक ००:०४
यस्ता पो वडाध्यक्ष जो, निर्वाहका लागि गर्छन् माछापालन
१० कार्तिक २२:२६
६. सिनकोईवामा दीपेश द ब्याण्डको लाईभ कन्सर्ट हुने